घर युरोपियन स्टार फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू। क्रेडिट्स: फुटबॉलप्लेयरछिलहुडपिक्स र बीसोकर्स
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "पेपको केटा“। हाम्रो फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
प्रारम्भिक जीवन र फिल फोडनको उदय
विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ख्याति भन्दा पहिलेको जीवन कहानी, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र म्यानचेस्टर परिवार जराका फुटबलरको बारेमा अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी इ England्ल्याण्डको सब भन्दा सम्भावित प्रतिभाको रूपमा मानिन्छ, र एक बिरामी नौजवान जो शहरको लागि पहिलो-टीम स्टार्टर हुनको लागि कुर्दै छ। जहाँसम्म, केवल एक हातले केहि हाम्रो संस्करण विचार गर्दछ फिल फोडनको जीवनी जो धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरूवात गर्दै, उसको पूरा आमा-बाबुले उसलाई दिएको पूरा नाम हो "फिलिप वाल्टर फोडेन"र होइन"फिल फडन"हामी सबैलाई थाहा छ। फोडेनको जन्म मे २००० को २ m औं दिनमा उनको आमा क्लेयर फोडन र बुवा बुबा फिल फोडेन स्नारको, संयुक्त राज्यको स्टकपोर्टको मेट्रोपोलिटन बरोमा भएको थियो। तल उसको सँधै सुन्दर र जीवन्त आमा हुनुहुन्छ र उसको शान्त लुक जस्तो बुबाको फोटो छ।
फिल फोडनका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्- उहाँकी आमा क्लेयर फोडन, र बुबा फिल फोडन स्नार। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
फिल फोडनका बाबुआमाले “फिल”उनीहरूको जेठो छोराको रूपमा। मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्म भएकोले फिलको आमा, बुवा वा नजिकका परिवारका सदस्यहरू मध्ये कुनै पनि म्यानचेस्टरका धनी वर्गका होइनन्। सानो फोडनले आफ्नो बर्षको प्रारम्भिक भाग एजजीमा बिताए जुन एक सामान्य स्टॉकपोर्ट उपनगर हो जसलाई प्रायः कम र मध्यम-वर्गको आय कमाउनेहरूको लागि उत्तम क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ।
म्यानचेस्टर परिवार मूलबाट स्टॉकपोर्टमा जन्मेका फुटबलर आफ्ना बुबाआमाको एकमात्र बच्चाको रूपमा जन्मेका थिएनन्। ऊ आफ्नी सानी बहिनीको साथ हुर्कियो जसको नाम लेख्ने क्रममा अज्ञात छ। तल सानो फिल फोडन र उसको बच्चा बहिनीको एक दुर्लभ तस्विर छ जो सम्भवतः केहि वर्ष (१ वा २) भन्दा कान्छी छ।
सानो फिल फोडन आफ्नी सानी बहिनीको साथ हुर्किए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
फिल फुटनको फुटबलको प्रारम्भिक जीवन: फिल म्यानचेस्टर सिटी एफसी परिवार समर्थकहरूको परिवारमा जन्म भएको थियो। एक बच्चाको रूपमा, उनी एक संवेदी शिक्षार्थी थिए जसले आफ्नो परिवारको बैठक कोठामा फुटबल बल लात हान्न पहिले जोश पायो। फिल ठूलो हुँदै जाँदा, ऊ हरेक हप्ताको अन्तमा उसको आमा र बुबासँग इतिहाद जान थाल्छ, "खडा देखि नीलो मून " सबै अन्य शहर प्रशंसक जस्तै।
फिल फोडनले दिनभरि आकाश निलो रिस्टब्यान्डको साथ पूर्ण सिटी किट लगाउन सक्दछन्। क्रेडिट: सूर्य
क्लबको त्यस्तो प्रशंसाले उनका आमाबाबुले उहाँलाई फिर्ता लिनको लागि थोरै फोडनको माग गर्‍यो।पूर्ण म्यान सिटी किट ”। माथी चित्रित, फिल फोडनका बाबुआमाले उनलाई उनको सपनाको किट किन्थे र उनी फुटबल खेलहरूमा यो सँधै लगाउँथ्यो। बाल्यकालको समयमा फुटबलको लागि आफ्नो चाहना जारी रहँदा, युवाले आफ्नो भाग्य अँगाल्नु भन्दा पहिले केही समय लागेन जब उनी एक पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्थे।
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
चाँडै, सानो फिललाई थाहा थियो कि उनीसँग फुटबलबाट केहि बनाउने प्रतिभा छ। म्यानचेस्टर स्थानीय पिच मा आफ्नो कौशल आदर पछि, उत्साही बच्चा म्यान सिटी एकेडेमीको साथ ट्रायलहरू भयो। उनका आमाबाबु र परिवारका अन्य सदस्यहरूको खुसीको सीमा कुनै सीमा थिएन जब फिल आफ्नो परीक्षणहरू उडान र withहरूमा पारित गरे।
सानो फिल फोडन 8. वर्षको टेंडर उमेरमा म्यान सिटी एकेडेमीमा भर्ना भए। यो क्लबको लागि खेल्नु भनेको साना केटाको लागि सबै कुरा हो जुन सही प्लेटफर्म प्रदान गरिएको थियो, युवा उमेरमा यस प्रतिभाको पालनपोषण गर्न ठूलो अभिभावकको समर्थन सहित।
फिल फोडनले सानैमा आफ्नो भाग्यको निर्णय गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
मानचेस्टर ईभेनिN न्युजका अनुसार फिल फोडनसँग आफ्नो क्यारियरको शुरुवाती चरणदेखि नै ताराको गुणस्तर थियो। उसको क्लब (मैन सिटी एकेडेमी) मद्दत गर्न सकेन तर उहाँ र उनका साथीलाई आफ्नो कदर देखाउन। तपाईंलाई थाँहा थियो?… फिल युवा युवा श्रेणीबाट धेरै प्रभावित भएपछि म्यान सिटी एफसीले एक पटक आफ्नो विदेशी कारको बलिदान गरे (a लिमोसिन) सानो फिल र उसको टीमका दर्शकहरूको लागि उनीहरूको अन्तिम-सीजन प्रस्तुतीकरणको लागि। तलको फोटोले त्यस्तो गुणको कारको साथ फोडनको पहिलो अनुभव देखाउँदछ।
फिल फोडनले सानै उमेरमा यति धेरै गुण देखायो कि म्यान सिटीले उनको र उनको टीमका साथीहरूको लागि सीजनको अन्तमा प्रस्तुतीकरणको लागि लिमोसिन त्याग गर्नु पर्‍यो। क्रेडिट्स: म्यानचेस्टरवेली न्यूज
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
एकेडेमीमा उनको किशोरावस्थाको समयमा, फिल फोडन आक्रामक मा विकसित भयो whiz बच्चा जसले प्रशंसकहरूलाई खुशी पार्न बाहेक अरू केहि पनि गरेन। म्यानचेस्टरमा जन्मेका स्थानीयलाई चिपकने नियन्त्रण र विगतका विरोधीहरूको बहिर्गमनले आशिष्‌ दियो। फिल फोडनको सफलताले उनलाई देख्यो एकेडेमीलाई माथि सार्ने धेरै द्रुत गतिमा खडा भयो किनकि उनी सबै प्रकारका विरोधीहरूका विरुद्धमा सफल भए।
फिल फोडन अर्ली क्यारियर लाइफ सिटी। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
एकेडेमीमा छँदा उसले आफ्नो शिक्षा जारी राख्यो: म्यान सिटीमा खेल्दा, फिल फोडनका अभिभावकहरूले आफ्नो छोरालाई आफ्नो फुटबल क्यारियरको लागि पूर्ण रूपमा सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर जोड दिए। यसको जवाफमा म्यान्चेस्टर सिटीले फोडनलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। क्लबले उसको ट्यूशन शुल्क तिर्ने समय निजी स्कूलमा स्कुल गरिएको थियो सेन्ट बेडेको कलेज म्यानचेस्टर, इ England्ग्ल्यान्डको व्याली रेंजमा अवस्थित छ।
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि
सेन्ट बेडे कलेजको निजी कक्षामा पढाउँदा प्रतिभाशाली र व्याकुल किशोर किशोरीले उनलाई के गर्ने राम्रो तरीकाले जान्ने कुरा जारी राख्यो। उनको कामलाई आफ्नो काम बनाउँदै। किशोरावस्थाको उमेरमा, फिलले बुझेका थिए कि सफलता प्राप्त गर्नका लागि उनीसँग टेक्निकल क्वालिटी, थोरै भाग्य हुनु आवश्यक छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त चोट नपरोस्।
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, फोडनको पहिलो किशोर खेलकुद सफलता आयो जब उसले आफ्नो युवा पक्षलाई प्रतिष्ठित जित्न मद्दत गर्‍यो नियन कप। त्यो प्रतिस्पर्धामा, आशाजनक फुटबलरले "टूर्नामेन्टका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी“। उहाँलाई चिन्ने सबैका लागि, यो संकेत हो कि उसले उदासीन फुटबलले वास्तवमा एकेडेमी फुटबलरको रूपमा आफ्नो ग्रेड बनाएको छ।
फिल फोडनले एक पटक प्रमाणित गरे कि उनी शहरका सबैभन्दा ठूला युवाहरू मध्ये एक हुन् जसलाई उनीहरुको सम्मानका लागि धन्यवाद छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
The "म्यान सिटी एकेडेमी मुख्य गोल निर्माता " धेरै उपनामित उहाँलाई मित्र भनेर इंग्ल्याण्डको U16 प्रतिनिधित्व गर्न बोलाइएको थियो जहाँ उनले तत्काल प्रभाव पार्‍यो। एक बर्ष भन्दा पनि कम समयमा, फिल अंग्रेजी 17१ team टीममा प्रगति गरे। युवा फुटबलर सँगसँगै Jadon Sancho र कलम हडसन ओडिडी फिफा U-17 विश्व कपमा भाग लिन बोलाइएको थियो। तल टूर्नामेन्टमा फिलको प्रदर्शनको झलक छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फिल फोडेनले मात्र इ the्ल्यान्ड यू १17 टीमलाई ट्रफी उचाल्न मद्दत गरेनन्, उनी फिफा यू -१ World वर्ल्ड कप गोल्डन बलमा पनि विजयी भए। फेरि, उनको युवा सफलता त्यहाँ रोकिएन। भाग्यशाली फोडन पनि समातिए २०१ BBC बीबीसी युवा खेल व्यक्तित्व वर्षको पुरस्कार तल फोटो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
फिल फोडेन राइज फेम कथा- उनले फिफा अ १-विश्व कप, फिफा अ १ 17 गोल्डन बल र २०१ BBC बीबीसी युवा खेल व्यक्तित्वको वर्ष जिते। छवि क्रेडिट: बीबीसी, सूर्य र दैनिकमेल
लेखनको समयमा, म्यानचेस्टरमा जन्मे मिडफील्डरलाई म्यान सिटीको सबैभन्दा आशाजनक युवाको रूपमा लिइन्छ पेप Guardiola र गेरैथ साउथेट। फिल म्यान सिटी टीम का हिस्सा थिए जसले २०१ble/०2018 को मौसममा ट्रेबल- प्रीमियर लिग, एफए र ईएफएल कप (+ एफए कम्युनिटी शिल्ड) जितेका थिए। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
अ football्ग्रेजी फुटबलमा उनको ख्याति बढेको साथ धेरै प्रशंसकहरूले फिल फोडनकी प्रेमिका छन वा उनी वास्तवमै विवाहित छन् भन्ने थाहा पाएर चिन्तित भएका छन्। सत्य हो, फिल लेखन को समयमा विवाहित छैन तर उनको एक प्रेमिका छ।
सफल फुटबलर पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जो रेबेका कुक नामबाट जान्छ। यस अनुसार Liverampup ब्लग, फिल र रेबेका दुबै (तल चित्रमा) एक अर्कालाई हाई स्कूलको दिनदेखि चिनेका छन्।
फिल फोडनको प्रेमिका रेबेकालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: सूर्य
फिल फोडेन १ 18 वर्षको उमेरमा आमाबाबु बन्ने छनौट गर्छन् जुन आफ्नो क्यालिबर र उमेरका युवा फुटबलरहरूका लागि एक दुर्लभ तथ्य हो। उनले आफ्नो सुपर प्रेमिका रेबेकासँगै जनवरी २०१ 24 को २th तारिखमा एक प्यारी बच्चाको स्वागत गरे। तल फिल र उनको छोरोको फोटो छ जुन उसको बुवा भन्दा अठार वर्ष कान्छी छ।
फिल फोडनले छोराको साथ क्रिसमस मनाउने चित्रण गरे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
तपाईंलाई थाँहा थियो? फिल फोडन फुटबलबाट रिटायर हुने समय (सायद 36 18 वर्षको उमेरमा), उनको छोरो १ XNUMX वर्षको र शायद एक वरिष्ठ टोलीका फुटबलरमा हुनेछन्।
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
फिल फोडनको व्यक्तिगत जीवनका तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई खेलको पिचबाट उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गरेर, बेन्चमा सक्षम नहुने दबाबहरूबाट अन्वाइन्ड गर्न उत्तम उपाय छैन केविन डी ब्रुने, डेभीड सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा र İlkay Gündoğan. फिल आफ्नो साथीहरूसँग वा नगरी सबै प्रकारका प्रजातिहरू समात्न समय खर्च गरेर म्यान सिटी दबाबबाट पर्दछन्। उसको कस्तो अतुलनीय शौक छ!.
हामी तपाईंलाई फिल फोडनको व्यक्तिगत जीवन फुटबलबाट टाढा प्रस्तुत गर्दछौं। फिसिंग उसको होबी छवि क्रेडिट हो: इन्स्टाग्राम
फिल फोडनको व्यक्तिगत जीवनमा पनि उहाँ उदार व्यक्तित्व राख्नुहुन्छ। करोडपति फुटबलरले यसलाई जीवनमा बनाएको भए पनि आवश्यकता महसुस गर्दैन।काट्नु'उसको बाल्यकाल मित्र र स्कूल शिक्षकहरूबाट। घर, कारहरू किन्नुको सट्टा, फोडनले अझै पनि आफ्ना पैसाहरू मानिसहरूमा राख्छन् जसलाई उनले एकपटक आफ्ना सपनाहरू साझा गरेका थिए। तलको फोटोमा, फुटबलरले स्टकपोर्टमा रहेको यस स्कूलको एउटा भ्रमणको क्रममा आफ्ना एक शिक्षकका लागि केही उपहारहरू खरीद गर्दछ जहाँ बच्चाहरूले उसलाई क्र्याक गर्दछन्।
फिल फोडनको नम्र व्यक्तित्व छ। यहाँ, उसले आफ्नो स्कूलको शिक्षकलाई अनुमोदन दिन्छ। क्रेडिट: ट्विटर
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
यस सेक्सनमा, हामी फिल फोडनको पारिवारिक जीवनको लागि अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछौं। सुरूवातबाट, फुटबलर लेख्ने समयमा अझै पनि आफ्नो प्रेमिकाको साथ बच्चा जन्मेको बावजुद आफ्ना बाबुआमासँग बस्दछन्। फोडनको सफलताले उनको परिवारलाई एउटा सामान्य बगैंचामा रहेको एडपलेबाट दक्षिण म्यानचेस्टरको समृद्ध क्षेत्र ब्राम्हल सर्न अनुमति दियो।
फिल फोडनको बुबामा थप: आफ्नो छोरालाई तनावपूर्ण बनाउँदै आफ्नो प्रेमिका रेबेका संग एक घर सेट गर्न को लागी एक जवान (उमेर १ aged) हुन सक्छ, फिल फोडनका बुबा फिल स्नरले भने कि उनका बाबु बाबुआमा बन्नुभए पछि उनी र उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरूसँग रहनु पर्छ। फिल फोडेन आफ्नो बुवाको घरमा बस्न सहमत भए जबकि उनकी प्रेमिका रेबेका उनको आमासँगै थिइन्।
फिल फोडनको आमामा थप: क्लेयर फोडेन एक गृहकर्मी हुन् जसले उनको घरको राम्रो देखभाल गर्नुका साथै सानो फोडन र तिनकी बहिनीको लालनपालन सुनिश्चित गर्नु बाहेक अरू केही गर्दैनन्। अघिल्लो बर्ष भन्दा फरक जब उनी सानो घरको व्यवस्थापन गर्छिन्, एक सुपर उत्साहित क्लेयर (तल चित्रमा) अब एक २£ मिलियन डलरको घर छ जुन उनको छोराले उनको लागि २०१2वरिपरि खरिद गरेको थियो (TheSunUK रिपोर्टहरू)।
फिल फोडनको आमाले एक २£ मिलियन डलरको एक ठूलो लाभार्थी थियो जुन उनको छोराले एउटा साधारण स्टकपोर्ट सहरमा किन्नुभयो। क्रेडिट: TheSunUK
फिल फोडनको बहिनीमा बढी: फोडनको एक बहिनी छ जसले हाल धेरै आश्चर्यजनक फाइदाहरूको आनन्द लिइरहेको छ भएको एक ठूलो भाई प्रिमियर लिगमा खेल्दै। तल फिल र उसको बहिनी दुबैको प्रारम्भिक र हुर्किएको फोटो छ जुन उसलाई अरू कसैलाई भन्दा राम्ररी चिन्छ।
फिल फोडनको बहिनीलाई भेट्नुहोस्। छवि इन्स्टाग्राम
फिल फोडनको हजुरआम: तपाईको हजुरबा हजुरबा हजुरआमालाई जीवित बनाएको अनुभूति तपाईको क्यारियरमा ठुलो बनाएर हेर्नु अद्भुत छ। यो हाम्रो आफ्नै फिल फोडेनको मामला हो। सबैभन्दा ठूलो उपहार उहाँ उसलाई दिन्छ हजुरआम उहाँको शर्त प्रेम र समर्थन हो।
फिल फोडनको हजुरआमालाई भेट्नुहोस् जसले आफ्नो नातिको सफलता देख्नुभयो। क्रेडिट: आईजी
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
डिसेम्बर २०१ In मा, फोडनले म्यानचेस्टर सिटीसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसले उनलाई प्रति वर्ष १.2018 मिलियन यूरो (१. M मिलियन पाउन्ड) तलब कमाइरहेको देखे। यो स a्केत हो कि ऊ करोडपति फुटबलर हो र उनी महँगो जीवनशैली बिताउन योग्य छन्।
यद्यपि, लेख्ने समयमा फिल फोडेन विदेशी जीवनशैलीको लागि एक औषधी हो भनेर मानिन्छ, महँगो हातोको कपडा, कपडा, कार र एक हवेली सबैको लागि सजिलैसँग सजिलै देख्न सकिन्छ, साप्ताहिक ज्यालामा £ ,०,२30,241१ प्राप्त गरेको बावजुद। , फुटबलरहरू औसत कपडा लगाउन रुचाउँछन्। वास्तवमा यो उसको हो कोठा उहाँ पहिले नै धनी थियो जस्तो देखिन्थ्यो।
१.1.7 मिलियन यूरो र weekly ,०,२30,241१ साप्ताहिक ज्यालाको वार्षिक तलब कमाए पनि फोडेन एक नम्र लाइफस्टाइलको जीवन बिताउँदछन्। क्रेडिट: आईजी
फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उनले गिनीज बुक अफ रेकर्ड राखेका छन्। फिल फोडेन पौराणिक भूतपूर्व फुटबलरमा सामेल भए पेल र लिओनेल मेस्सी गिनीज बुक अफ रेकर्ड राखेर।
फिल फोडनको गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड छ। क्रेडिट: गिनीज वर्ल्ड रेकार्ड र Pinimg
तपाईंलाई थाँहा थियो?… Foden 'को रूपमा रेकर्ड होयुवा फुटबल खेलाडी प्रीमियर लिग जित्नको लागि'। प्रख्यात संदर्भ पुस्तकका अनुसार फिल फिलोडनको नाम २० series० को श्रृंखलामा प्रकाशित हुनेछ।
फिल फोडनको ट्याटू: हामी सबैलाई थाहा छ ट्याटू संस्कृति आजको फुटबल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। फिल Foden लेखन को समयमा ट्याटु-मुक्त छैन। उनले एक पटक दाहिने हातमा स्याही खिचेका थिए जुन उनको उत्कट चित्रण गर्दछ, अन्य चीजहरू मध्ये प्रायोजक लोगो।
ट्याटू फोटोहरूको अगाडि र पछी फिल फोडन। छवि क्रेडिट: ट्विटर
उनी मिलेनियमको सबैभन्दा सफल शुरुवात तारा मध्ये एक हो: सेतो अंग्रेजी परिवार जरा संग फुटबलर नयाँ सहस्राब्दी (वर्ष २०००) को बिहान मा जन्म भएको थियो। यो यस्तो वर्ष हो जहाँ प्राविधिक अवरोधहरू पहिले दावी गरिएको थियो - वास्तवमै कहिले पनि भएको थिएन।
सत्य भनियो!… कुख्यात वाई २ के मिलेनियम बग कहिल्यै थिएन। हवाइजहाजहरू, पूर्वानुमान गरिए जस्तो कहिल्यै आकाशबाट झर्ने छैन, झर्नु भएन। क्षेप्यास्त्रहरू पनि दुर्घटनाबाट फुटेनन् र अन्तमा, कम्प्युटरहरूमा मितिहरूको काल्पनिक पुनःसेट कहिल्यै भएन।
धर्म: उनको क्षेत्रको सम्बन्धमा, फिल फोडन क्याथोलिक हुन् र उनी क्याथोलिक परिवारको परिवारमा हुर्केका थिए। यस तथ्यले सेन्ट बेडेको रोमन क्याथोलिक सह-शैक्षिक विद्यालय को हो भनेर वर्णन गर्दछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फिल फोडन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
सेप्टेम्बर 2, 2017